Alakamisy 12 Septambra 2019. – FJKM
Alakamisy 12 Septambra 2019.
2 Korintiana 6.1-18/7.4
« Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana , indro ankehitriny ny andro famonjena » (6.2)
Mpanompon’ Andriamanitra ianao:
1-Aza manao izay hanafitohina ny hafa
Zavatra voalohany tsy maintsy tandremantsika mpanompon’ Andriamanitra dia ny manao izay tsy hanafitohina ny hafa na amin’inona na amin’inona izany , fahavalon’ny fanompoana izany (Mat 18.6.10/ Mar 9.42) . Asehoy ny tenanao ho mpanompon’ Andriamanitra marina tokoa amin’ny zavatra rehetra (jereo and4-10).
2-Tempolin’ Andriamanitra velona
Fahamasinana no dikan’izany , voatokana , tsy azo afangaro amin’ny hafa. Izany no hisokajin’ Andriamanitra ny mino . »Fa isika no tempolin’ Andriamanitra velona , araka ny nataon’ Andriamanitra hoe : honina eo Aminy Aho , ary izy ho oloko » (6.16) . Tandremo tahaka ny anakandriamaso izany fahamasinanao izany satria « Raha misy manimba ny tempolin’ Andriamanitra dia mba hosimban’ Andriamanitra kosa ianareo » (1 Kor 3.17). « Anaka , arovy ny tenanareo amin’ny sampy » (1 Jao 5.21).
3-Manadio ny tena ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra
I Paoly dia sahy nilaza ny azy hoe: « …tsy nanao izay tsy marina tamin’ny olona izahay, tsy nanimba olona , tsy nanambaka olona » (7.2). Ianao izay mpanompon’ Andriamanitra ankehitriny mba manao ahoana kosa…? Hoy i Paoly hoe : « Koa mananatra anareo aho , manahafa ahy ianareo » (1 Kor 4.16.11.1).